३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त ‘गोरे’ लाई यसरी गरियो सार्वजनिक
Topic: ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त ‘गोरे’ लाई यसरी गरियो सार्वजनिक
Author Topic: ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त ‘गोरे’ लाई यसरी गरियो सार्वजनिक (Read 3002 times)
« on: May 22, 2018, 09:45:56 PM »
काठमाडौं, जेठ ८ –
३३ किलो सुन र सनम हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त ‘गोरे’ भनिने चुडामणि उप्रेती काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन् ।
यो टोलीले ३३ किलो सुन काण्डमा संलग्न भएका ६५ जना विरुद्ध २०७५ जेठ १९ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा विभिन्न आपराधिक समुहको स्थापना लागायत संगठित अपराध ऐन अन्र्तगत आकर्षित हुने अभियोजन सहितको मुद्धा दर्ता गरिसकेको छ । टोलीले अनुसन्धानको दायरामा राखेकाका बारेमा पनि प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा गोरेबाट थप तथ्य र सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिएपनि समितिले ती सूचना भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
यसअघि प्रतिवादी बनाइएका यसै मुद्धाका ६५ मध्ये ३३ फरार र ३२ जनालाई अदालत समक्ष पठाइसकिएको छ । मुद्धाका मुख्य अभियुक्त मोरङ उर्लाबारी ४ घर भई काठमाडौंको गौरीघाटमा बसोबास गर्दे आएका थिए । ३३ किलो सुनकाण्ड पनि उनी फरार सूचीमा थिए ।
Re: ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त ‘गोरे’ लाई यसरी गरियो सार्वजनिक
« Reply #1 on: May 22, 2018, 09:47:09 PM »
मोरङ जिल्ला अदालतले हत्या तथा सुन काण्डमा संगठित अपराध गरेका २८ जनालाई जेल चलान गरेको छ ।
from - ujyaloonline
« Reply #2 on: May 23, 2018, 06:49:26 AM »
३३ किलो सुन प्रकरण : रहस्यमय मोडमा अनुसन्धान
- from annapurnapost
काठमाडौं : साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मोरङ उर्लाबारीका ‘गोरे’ भनिने चूडामणि उप्रेती मंगलबार पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेपछि दिएको प्रारम्भिक बयानमा गोरेले प्रहरीकै मिलेमतोमा विमानस्थलबाट निर्बाध सुन तस्करी गर्ने गरेको स्विकारेका छन्।
मंगलबार बिहान पाँच बजेर ३५ मिनेटमा काठमाडौं गौरीघाटबाट पक्राउ परेका गोरेबाट थप तस्कर र तिनका मतियारको नाम संकलन गरेको छानबिन समितिको दाबी छ। गोरे पक्राउबारे जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छानबिन समितिका संयोजक एवं सहसचिव ईश्वरराज पौडेलले भने, ‘गोरे भारत-नेपाल सीमामा आउजाउ गर्ने र लुकिछिपी बस्दै गरेको सूचना हामीले पाएका थियौं। उनी काठमाडौं आएको सुराक पाएपछि मंगलबार बिहान पक्राउ गरेका हौं।’
पौडेलले सुन तस्करी, शाक्य हत्या, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित थाई एयरलाइन्सका लोडर सानु बमको शंकास्पद मृत्युसँगै संगठित अपराधका मुख्य अभियुक्त गोरे पक्राउ परेकाले घटनाको थप रहस्य बाहिर आउने बताए। उनले भने, ‘यो घटना जेरीजस्तै जेलिएको छ।
हामीले गोरेबाट सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा थप तथ्यप्रमाण प्राप्त गरेका छौं। अभियुक्तबाहेकका अन्य सूचना समेत प्राप्त भएका छन्। अनुसन्धान अत्यन्त जटिल र गम्भीर प्रकृतिको छ।’
गोरेले आफू मुख्य तस्कर नभएर व्यवस्थापक भएको बयान समितिलाई दिएका छन्। उनले बयानमा केही बहालवाला र पूर्वप्रहरी अधिकृतसँगै नेताको नामसमेत पोलेका छन्। हाल प्रहरीले गोरेसहित ६५ जनाको संलग्नता खुलाइसकेको छ, जसमा ३३ जना अझै फरार छन्। शाक्य हत्यापछि उनको शव गायब पार्न गोरेले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरीलाई दुई करोड रूपैंयाको अफर गरेका थिए।
गोरे अदालतमा पेस
मुख्य अभियुक्त गोरेलाई मंगलबारै जिल्ला अदालत मोरङमा पेस गरिएको छ। काठमाडौंबाट दिउँसो यती एयरलाइन्सको जहाजमार्फत विराटनगर ल्याइएका उनलाई साँझ ५ बजे अदालतमा पेस गरिएको थियो।
विमानस्थलबाट सीधै जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगेपछि अदालतमा उपस्थित गराइएको हो। उनलाई हेर्न अदालतमा परिसरमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणसमेत उपस्थित थिए।
गोरेलाई करिब १० मिनेट राखेर फिर्ता गरिएको थियो। गोरेसँग बुधबारबाट बयान लिइने अदालतका निमित्त से्रस्तेदार एवं तहसिलदार केदारप्रसाद गौतमले बताए। गोरे अदालतमा ल्याइनासाथ सनमका आफन्तले ‘ज्यानमारालाई फाँसी दे’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।
३३ किलो सुन हराएपछि खोजी गर्ने क्रममा उर्लाबारी-१ स्थित सोल्टी खोला किनारको जंगलमा करेन्ट लगाई यातना दिएर गोरे समूहले फागुन १८ गते सनमको हत्या गरेको थियो। सुन लुकाएको आरोप सनम, उर्लाबारीकै मोहन काफ्ले, कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्की, विमानस्थलका कर्मचारी तक्ले भनिने पुण्यप्रसाद लामालगायतलाई लगाइएको थियो।
गोरेलाई २०७३ साल पुस २१ गते यूएईबाट तस्करी गरेर नेपाल ल्याइएको ३३ किलोग्राम सुन पक्राउ काण्डमा मुख्य अभियुक्तका रूपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मोस्ट वान्टेडको सूचीमा राखेको थियो। हराएको तस्करीको सुन खोज्ने क्रममा सनमको हत्या भएपछि भारत भागेको गोरेविरुद्ध प्रहरीले ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको थियो।
घटना रहस्यमय बनेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलको नेतृत्वमा सरकारी छानविन समिति गठन भएको थियो।
को हुन् गोरे ?
गोरे चर्चित पूर्वफुटबलर हुन्। उनी मोरङ ११ बाट खेल्थे। पछि भारतीय सेनामा भर्ती भए। तीन वर्ष काम गरे अनि दुबईको अबुधाबी पुगे। त्यहाँ प्रहरीमा जागिर खाए। पाँच वर्ष दुबई बसे। पछि सुन पठाउने र हुन्डी कारोबारमा लागे।
नेपाल फर्किएर गोरे दुबई, सिंगापुरबाट नेपालतर्फ सुन पठाउने धन्दा चलाउन थाले। एकाएक उनको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि गाउँलेले अवैध धन्दाको आशंका गरेका थिए।
उनका बाबु नेत्रप्रसाद अवकाशप्राप्त असई हुन्। मोस्ट वान्टेड हुँदाहुँदै पनि प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग नियमित सम्पर्क भएको कुरा छानबिन समितिले पत्ता लगाएको छ। सनमको हत्या भएपछि शवको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि उनले प्रहरी अधिकारीलाई सम्पर्क गरी सल्लाह मागेको खुलेको छ। पक्राउ परेका निलम्बित एसपी विकासराज खनालले शव ल्याएर गाडी नै त्रिशूलीमा फालिदिनू भनेर सिकाएको फोन रेकर्डसमेत छानबिन समितिले फेला पारेको छ। अभियुक्तले शव धरान र इटहरीको बीचमा जंगलमा झाडीमा गाड्ने तयारी भएको समेत बयान दिएका छन्।
गोरे समूहले तीन वर्षमा तीन हजार सात सय ९९ किलो पाँच सय ५९ ग्राम सुन विमानस्थल हुँदै तस्करी गरेर ल्याएको खुलेको छ। यो परिणामको सुन सन् २०१५ जुलाईदेखि तस्करी भएको हो।
प्रहरीलाई पैसा बुझाएकै हो : गोरे
समितिसँगको बयानमा गोरेले विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई पैसा बुझाएको स्वीकार गरेका छन्। उनले अपराध महाशाखाका सई बालकृष्ण सञ्जेलसँग पुरानो सम्बन्ध रहे पनि डीएसपी प्रजित केसीसँग फोनमा मात्रै कुरा भएको बताएका छन्।
समितिका एक सदस्यका अनुसार विमानस्थलका तत्कालीन डीआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी श्याम खत्री, एसपी विकास खनाल र डीएसपी सञ्जय राउतलाई पैसा बुझाएको स्वीकार गरेका छन्।
पक्राउ परेका केही सहयोगी भएको र त्यसमध्ये भुजुङ मुख्य पार्टनर रहेको गोरेले बताए। ‘डायरीमा मामा उल्लेख गरेका प्रहरीलाई आफूले चिन्ने र पैसा दिएको पनि उनले स्वीकार गरेका छन्’, समितिका एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अन्य प्रमाण जुटाउँदै छौं।’
समितिले गोरेको कोठाबाट बरामद भएको डायरीमा उल्लेख भएको अक्षर र गोरेको अक्षरलाई विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लगेर जाँच गर्ने भएको छ। गोरेले समितिलाई बयानमा थप व्यक्तिको नाम खुलाउने बताएका छन्।
गोरेको बयान उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले भने, ‘म तस्कर होइन। तपाईंहरूलाई म तस्करको नाम दिन्छु, समात्न सक्नुहुन्छ।’ गोरेले पैसाले मात्रै सुन तस्करी सम्भव नभएको बताउँदै त्यसका लागि प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दल र सरकारमा रहेका उच्चपदस्थको समेत भूमिका रहने कुरा उल्लेख गरेका छन्।
आफूले दुबईबाट सुन झिकाए पनि भुजुङले उच्च तहको सेटिङ मिलाउने गरेको बयान उनले समितिलाई दिएका छन्। सनम शाक्यको शव व्यवस्थापन गर्न प्रहरीलाई आफैंले फोन गरेर दुई करोड रूपैयाँको अफर गरेको पनि उनले स्विकारेका छन्। ‘धेरै प्रहरीलाई पैसामा खेलाएको थिएँ’, बयानमा उनले भनेका छन्, ‘शाक्यको शव व्यवस्थापन पनि प्रहरीबाटै गराउने योजना थियो। तर पूरा भएन।’ गोरेको कोठाबाट बरामद डायरीमा प्रहरीलाई मात्रै दुई करोडभन्दा बढी रूपैयाँ बुझाएको फेला परेको थियो।
समिति संयोजक पौडेलले फरार एसएसपी श्याम खत्री पक्राउ परेपछि थप रहस्य बाहिरिने बताए। गोरेले भुजुङ, छिरिङ वाङ्गेल, मोहन कृष्ण अग्रवाल र भारतीय कारोबारीको सहयोगमा सुन तस्करीलाई पूर्णता दिएको बयानमा स्विकारेका छन्।
कसरी पक्राउ परे गोरे ?
गोरे अपराध महाशाखाको टोलीलाई छक्याउँदै भारतको दिल्ली पुगेका थिए। दिल्लीमा बसेर उनले आफ्ना समूहका अन्यलाई प्रहरी र अदालतका गतिविधिबारे सोधपुछ गरिरहेका थिए।
सानु वनका परिवारलाई विभिन्न माध्यमबाट सोधपुछ गरेर पनि गोरेले प्रहरी र न्यायालयका सूचना लिइरहेका थिए। अदालतमा विपक्षी वकिलका टेलिफोनलाई समेत समितिले सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेको थियोे।
सात दिनअघि गोरे नयाँ दिल्लीमा लुकेर बसेको सूचना पाएपछि समितिले एक डीएसपीको नेतृत्वमा टोली दिल्ली पठाएको थियो। उक्त टोली दिल्ली पठाएकोबारे समितिका पनि सीमित सदस्य मात्रै जानकार थिए।
सोमबार दिल्लीको एक होटलमा बसेका गोरेलाई भारतीय प्रहरीकै सहयोगमा नेपालबाट गएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रण लिई सीधै जहाजमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओरालिएको थियो। सोमबार अपराह्नदेखि राति अबेरसम्म गोरेसँग समितिले बयान लियो। बयान सकिएपछि मंगलबार बिहान साढे पाँच बजे गोरेलाई उनी बस्ने डेरा गौरीघाटमा पु¥याइयो। डेरा पुगेपछि पनि गोरेले आफ्नो ज्यान बचाइदिन प्रहरी टोलीलाई अनुनय गरेका थिए।
मुद्दा चलाउन आन्तरिक कानुनी प्रक्रियाका कारण दिल्लीबाट ल्याइएका गोरेलाई गौरीघाटबाट पक्राउ परेको मुचुल्का तयार गरिएको समितिकै एक सदस्यले बताए। गोरे नियन्त्रणमा लिँदा उनी धेरै हतास र छटपटाहट अवस्थामा रहेको जानकारी ती सदस्यले दिए।
उनले भने, ‘प्रहरीले समातेपछि उसले कुनै हस्तक्षेप गरेन। ज्यान जोगाइदिनुप¥यो, सबै बताइदिन्छु भने।’ गोरेले संयुक्त अरब इमिरेट्समा नजमल जनरल ट्रेनिङ कम्पनी खोलेर सुन नेपालतर्फ तस्करी गर्दै आएको ती सदस्यले बताए।
गोरेले प्रहरीलाई गिरफ्तारी दिनुअघि भिडियो खिचेर एउटा अनलाइनमा मिडियामा दिएका थिए, जुन मंगलबार मात्रै सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा गोरेले सबै सुन तस्करीमा आफ्नो मात्रै नाम आएको भन्दै अन्यको विवरण आउँदै जाने बताएका छन्। शाक्यको हत्या आफूले नचाहँदा नचाहँदै भएको समेत भिडियोमा उल्लेख गरेका छन्। प्रहरीले भिडियोसहितको मोबाइल पनि बरामद गरेको छ।
यी हुन् गोरेका मुख्य सहयोगी
थाई एयरवेजका कर्मचारी
-सानु वन (मृतक)
नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरू
-राजु महर्जन-प्रेमलाल चौधरी (मृतक)
- टेकराज मल्ल
- मोहन काफ्ले
- बेनु श्रेष्ठ
- सनम शाक्य (मृतक)
- सुरेन्द्र गौतम
- रुस्तक मियाँ
- नरेन्द्र कार्की
- भोजराज भण्डारी
- दावा शेर्पा
- टुकबहादुर मगर
- ताक्ले भनिने पुण्य प्रसाद लामा
डीआईजी गोविन्द निरौला
एसएसपी श्याम खत्री
एसपी विकास खनाल
डीएसपी सञ्जय राउत
सई बालकृष्ण सञ्जेल
« Reply #3 on: May 23, 2018, 06:51:41 AM »
फुटबलरदेखि भारतीय सैनिकसम्म : सुन तस्करीका मुख्य नाइके गोरेको यस्तो छ विगत
सन् २०१५ जुलाईदेखि तस्करीमार्फत त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन नेपाल भित्र्याउँदै आएका मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका ७ स्थायी ठेगाना भएका अन्दाजी ३७ वर्षीय गोरे भनिने चूँडामणि उप्रेतीको विगतका बारेमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ।
तस्करीमार्फत भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि खोजी गर्ने क्रममा उर्लाबारी १ स्थित सोल्टी खोला किनारको जंगलमा करेन्ट लगाएर यातना दिँदा काठमाडौं महानगरपालिका ७ गौरीघाट बस्ने उनकै सहयोगी उर्लाबारी ७ का सनम शाक्यको गत फागुन १८ गते मृत्यु भयो। गोरे समूहले हराएको सुन लुकाएको आरोप सनम, उर्लाबारीकै मोहन काफ्ले, कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्की, विमानस्थलका कर्मचारी तक्ले भनिने पुण्यप्रसाद लामा लगायतलाई लगाएको थियो। सबैलाई यातना दिने क्रममा सनमको मृत्यु भयो।
सनमको शव राखिएको स्करपिओ सहित तीन जनालाई प्रहरीले फागुन १९ गते विराटनगर ३ बाट पक्राउ गर्‍यो। त्यतिबेला काफ्ले, कार्की र गोरेको चालकका रुपमा काम गर्दै आएका काभ्रेका टेकराज मल्ल ठकुरी पक्राउ परेका थिए। उनीहरू गोरे ग्याङ्मा आवद्ध भएर विगतदेखि सुन तस्करी धन्दामा सहयोग पुर्‍याउँदै आएका व्यक्ति भएको अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लागेको थियो।
उनै गोरे २०७३ साल पुस २१ गते युएइबाट नेपाल तस्करी गरिएको ३३ किलोग्राम सुन काण्डमा मुख्य अभियुक्तका रुपमा उप्रेतीलाई प्रहरीले मोस्टवाण्टेडको सूचीमा राखेको थियो।
मोरङको उर्लाबारी लगायतका क्षेत्रमा खुलेआम हिँड्ने गरे पनि उनलाई प्रहरीले यस अघि पक्राउ भने गरेको थिएन। उच्च प्रहरी अधिकारीकै संरक्षण मिलेपछि उर्लाबारीकै स्थानीय बक्राहा खोलामा रिक्सा र ठेला चालकलाई प्रयोग गरेर माछा मार्ने काम गर्दा सम्म पनि प्रहरीले उनका बारेमा थाहा पाउन सकेको थिएन।
उनकै संलग्नतामा तस्करीको सुन खोज्ने क्रममा सनमको हत्या भएपछि भने गोरे भारततर्फ भागेका थिए। भारततर्फ भागेको आशंकामा नेपाल प्रहरीले पक्राउका लागि अन्य मुलुकका प्रहरीसँग सहयोग लिन उनी विरुद्ध 'डिफ्युजन नोटिस' नै जारी गरेको थियो। सुन तस्करी र सनम हत्या काण्ड पेचिलो बन्दै गएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेत्रृत्वमा सरकारी छानविन समिति बनेको थियो।
हत्या गरिएका शाक्य र पक्राउ परेका काफ्ले तीन वर्षदेखि उनको सहयोगीका रुपमा काम गर्दै आएका थिए। कार्की भने दुई वर्षदेखि उनको गाडी चालकका रुपमा काम गर्दै आएका थिए। उप्रेती चर्चित पूर्व फुटबलर पनि हुन्। मोरङ ११ लगायत विभिन्न क्लबमा आवद्ध भएर उनले फुटबल खेलिसकेका छन्। राम्रो फुटबलर भएकै कारण जाउलाखेल युथ क्लबले पटक पटक गोरे माथि नजर पनि नलगाएको हैन। तर उनलाई मोरङ ११ ले उम्कन दिएन। फुटबल खेल्न छाडेर उनी भारतीय सेनामा भर्ना भएका थिए। त्यहाँ तीन वर्ष काम गरेपछि दुवईको अवुदावी पुगेर त्यहाँको प्रहरीको काम गर्न थाले।
उनका बारेमा जानकारी राख्ने एक व्यक्तिका अनुसार पाँच वर्ष दुवई बसेर उनी त्यहींबाट सुन पठाउने र हुण्डी कारोवार संचालन गर्ने धन्दामा संलग्न हुन थाले। त्यसपछि नेपाल फर्किएर दुवई, सिंगापुर लगायतका मुलुकबाट पठाएका सुन नेपालका विभिन्न ठाउँमा सप्लाई गर्ने धन्दामा उनको संलग्नता रहयो।
‘पहिले उहीं बसेर सुन पठाउने काम गर्ने गरेको पाइयो,’ घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘पछि ऊ आफै नेपाल फर्किएर मुख्य कारोवारी भएर सुन तस्करी गर्न थालेको पत्ता लागेको छ।’ मोस्टवाण्टेड हुँदाहुँदै पनि प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग उनको नियमित सम्पर्क भएको कुरा छानविन समितिले पत्ता लगाएको छ।
सनमको हत्या हुनु अघि एक वर्षदेखि उनी उर्लाबारी लगायत पूर्वका विभिन्न ठाउँमा घुमिरहेका भेटिन्थे। उर्लाबारीका एक युवाले भने, ‘प्रहरीको संरक्षण नभएको भए उनी कसरी खुल्लेआम रुपमा हिँड्न सक्थे ?’
सनमको हत्या भएपछि शवको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि उनले प्रहरी अधिकारीहरुलाई सम्पर्क गरेर सल्लाह मागेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। पक्राउ परेका निलम्बित एसपी विकासराज खनालले शव ल्याएर गाडी सहित त्रिशुलीमा फालिदिनू भनेर सिकाएको फोन रेकर्ड समेत छानविन समितिले फेला पारिसकेको छ। पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयान अनुसार सनमको हत्या भएपछि शव धरान र इटहरीको बीचमा रहेको चार कोषे झाडीमा गाड्ने तयारी पनि गरिएको थियो।
गोरे समूहले तीन वर्षमा तीन हजार सात सय ९९ किलो पाँच सय ५९ ग्राम सुन विमानस्थल हुँदै तस्करी गरेर ल्याएको खुलेको छ। सन् २०१५ जुलाई देखि हालसम्म उक्त परिणामको सुन तस्करी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। जिल्ला अदालत मोरङमा दर्ता गरिएको अभियोग पत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रचलित मूल्य अनुसार १७ अर्व एक करोड ८० लाख ७१ हजार चार सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बराबरको सुन तस्करी भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
गोरे सहित ६३ अभियुक्त विरुद्ध यो बराबरको माग दावी सहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यो मुद्दामा मंगलबारसम्ममा गोरे सहित ३१ जना पक्राउ परिसकेका छन्। यस अघि ३० जना मात्रै पक्राउ परेका थिए। ३० जनाका सम्बन्धमा भने अदालतमा थुनछेक बहस पनि सकिएको छ।
अभियुक्त विरुद्ध अपराधिक समूह स्थापना तथा संचालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्धा दर्ता भएको छ।
« Reply #4 on: May 24, 2018, 02:51:47 AM »
गोरेको दुबईमा आफ्नै कम्पनी
'लुटिएकाे साढे ३३ केजी सुन खाेज्न ७० लाख खर्च भयाे'
दीपक खरेल काठमाडौं जेठ ८
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १९ महिनामा ३ हजार ७ सय ६६ केजी सुन भित्र्याउने मुख्य तस्कर चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले दुबईमा आफ्नै नाममा कम्पनी स्थापना गरी संगठित रूपमा कारोबार गर्दै आएको खुलेकाे छ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १९ महिनामा ३ हजार ७ सय ६६ केजी सुन भित्र्याउने मुख्य तस्कर चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले दुबईमा आफ्नै नाममा कम्पनी स्थापना गरी संगठित रूपमा कारोबार गर्दै आएको खुलेकाे छ।
सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि गठित समितिले सोमबार रातीदेखि मंगलबार बिहानसम्म काठमाडौंको अज्ञातस्थलमा गोरेसँग लिएको बयानमा उनले एक करोडभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ खर्चेर संयुक्त अरब इमिरेटसमा नजमल जनरल ट्रेडिङ नामक कम्पनी संचालन गरेको बयान दिएका हुन्।
समिति संयोजक सहसचिव ईश्वरराज पौडेलका अनुसार गोरेले सो कम्पनीमार्फत दुबईमा सुन खरिद गर्ने र त्यहाँ रहेका भाई रमेश उप्रेतीसहितको सहयोगमा नेपाल पठाउने गरेका थिए। गोरेले बयानमा दुबईमा सुन तस्करीका सहयोगीहरुको नाम र ठेगाना समेत समितिलाई उपलब्ध गराएका छन्।
‘दुबईमा कम्पनी स्थापना गरेर संगठित रुपमै सुनको कारोबार गर्दै आएको तथ्य खुलाएका छन्, त्यहाँको नेटवर्कका विषयमा हामी खोजी गर्दैछौं,’ पौडेलले नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै भने।
उच्च नेतृत्व मिलाउने जिम्मा भुजुङलाई
समितिले पक्राउ गरी मंगलबार सार्वजनिक गरेका गोरेले बयानमा सुन तस्करीको राजनीतिक सेटिङ मिलाउने जिम्मा होटल मनाङका सञ्चालक तथा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता भुजुङ गुरुङ र उनका साला डा.डेविट भन्ने छिरिङ वाङ्गेल घलेको भएको उल्लेख गरेका छन्। गोरे आफूले भने एमके भन्ने मोहन अग्रवाल र भुजुङ गुरुङका लागि सुन तस्करीको प्रवन्ध मिलाउने गरेको स्वीकारेका छन्। गोरेको बयानअनुसार भुजुङ र उनका साला छिरिङले काठमाडौं भित्रिएको सुन भारतसम्म पुर्याउने गर्दथे।
सम्बन्धित खबर : गोरेद्वारा प्रहरीसँग मिलेर सुन तस्करी गरेको स्वीकार
‘माथिल्लो तहको प्रबन्ध भुजुङमार्फत हुने गरेको बयान आएको छ। उनका साला छिरिङको संलग्नता गम्भीर प्रकृतिको देखिएको छ,’ सहसचिव पौडेलले नेपालखबरसँग भने। समितिसँगको बयानमा गोरेले सन् २०१२ यता आफ्नो सम्पर्कमा रहेर तस्करीमा सघाउने व्यक्तिहरुको विवरण समेत उपलब्ध गराएका छन्। गोरेले उपलब्ध गराएको विवरण यसअघि पक्राउ प्रतिवादीसँग ठ्याक्कै मेलखाएको संयोजक पौडेलले उल्लेख गरे।
लुटिएको सुन खोज्न ७० लाख खर्च
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०७४ माघ ९ मा भित्रिएको साढे ३३ केजी सुन बीचबाटै गायब भएपछि त्यसको खोजीका लागि गोरेले ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बयान समितिमा दिएका छन्। सुन हराएदेखि सनमको मृत्यु हुँदासम्मको समय आफूले टोली लिएर भारतको सिलगुढी, विराटनगर, काठमाडौं र नुवाकोटसम्म पुगेर खोजीगर्दा सो रकम खर्च भएको उल्लेख गरेका हुन्।
‘सुन हराएपछि २ करोड सापट लिएको र त्यसमध्ये ७० लाख जति खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्, सो समयमा उनको सम्पर्कमा हाल थुनामा रहेका प्रहरी र अन्य ब्यक्तिहरु रहेको देखिन्छ,’ सहसचिव पौडेलले नेपालखबरसँग भने।
सञ्जेललाई ३५ लाख, लोहनीसँग पुरानो चिनजान
जिल्ला अदालत मोरङको अादेशले जेल चलान भएका महानगरीय अपराध महाशाखाका तत्कालीन सई बालकृष्ण सञ्जेललाई विभिन्न समयमा गरी गोरेले ३५ लाख रुपैयाँ दिएको बयान दिएका छन। उनले सञ्जेलसँग आफ्नो निकट सम्बन्ध रहेको बताउँदै काठमाडौंमा भित्रने सुन लुटिनबाट जोगाउन सहयोग गर्ने गरेको बयान समितिलाई दिएका छन्। गोरेले बयानमा एसएसपी दिवेश लोहनीसँग समेत आफ्नो पुरानो चिनजान रहेको खुलाएका छन्।
कसरी पक्राउ परे गोरे?
गत फागुन १८ गते राति मोरङबाट गायब भएका गोरे भारतमा लुकीछिपी बस्दै आएका थिए। भारतमा रहेका गोरेले भारतीय नम्बरबाट मोरङ, उर्लाबारीका एक सहयोगीसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका थिए। गोरेले ती व्यक्तिसँग सम्पर्क गरेको नम्बर हत्या भएका सनम शाक्यका परिवारले थाह पाएर छानवीन समितिलाई उपलब्ध गराएका थिए। सोही नम्बर पछ्याउँदै जाँदा भारतीय प्रहरीको सहयोगमा उनी नयाँ दिल्लीमा पक्राउ परेका हुन्।
आइतबारदेखि समितिका व्यक्तिले सक्रियता बढाएका थिए। समितिले गोरे पक्राउ परेपछि सनम शाक्यका परिवार सदस्यलाई फोन गरि धन्यवाद दिएको छ।
क्रुर गोरे गाँजा अम्बली
गृहमन्त्रालयको कोठा नम्बर १०९ बाट मंगलबार अपरान्ह १२ बजेर २ मिनेटमा गोरेलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल लैजान निकालियो। रातो टोपी, चस्मा, मुखमा कालो मास्क, कालो ज्याकेट, खेरो पाइन्ट लगाएका सुन तस्कर गोरेका हातमा हतकडी थियो। चारजना प्रहरी अधिकारीले घेरेर बाहिर निकालेका गोरेलाई निलो रंगको प्रहरी जिपमा अस्पताल लगिएको थियो।
करिब ५५ सेकेण्ड लामो यो प्रक्रियामा गोरेको हातको हत्कडीबाहेक अन्य गतिविधिले उनलाई तीन व्यक्ति हत्या (सनम शाक्य, सानु बन र प्रेमलाल चौधरी) र अर्बौं राजस्व ठगीका आरोपी भनी ठम्याउन कठिनै थियो। उनी एक हिसाबले ढुक्क, बिन्दास देखिन्थे।
करिब एक घन्टापछि गृहमन्त्रालयको हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित गोरेको आत्मबल अझ बलियो देखिएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सञ्चारकर्मीले उनले लगाएको टोपी खोल्न आग्रह गरेका थिए। ‘ल हेर’ भन्दै उनले मास्क नै खोलेर अनुहार देखाए। उनको हर्कतलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा डिआईजी हुतराज थापा उठ्नुपर्याे।
गोरेसँग पहिलो पटक तीन दिन बिताएका समितिका अधिकारीको अनुभवमा उनी सन्की, क्रुर र लागूऔषध गाँजाका अम्बली हुन्। समिति स्रोतअनुसार गोरेले हत्या गरेका सनम शाक्य उनका लागि गाँजाको व्यवस्थापन गर्ने सहयोगी थिए। सनमलाई सकेसम्म आफैँसँग लिएर हिँडन रुचाउने गोरेले उनलाई चुरोटमा गाँजा भरेर दिन्थे।
‘दिनभरसँगै रहेको समूहका सदस्यलाई निर्घात कुटने साँझ सबैलाई नगद दिने र भोज खुवाउने गरेको भिडियोमै देखियो, बिन्दास गँजडी समेत रहेछ,’
स्रोत - नेपालखवर
« Reply #5 on: May 25, 2018, 09:20:36 PM »
« Reply #6 on: May 27, 2018, 08:31:19 PM »
सुन तस्करी र हत्या मुद्दा: ‘प्रहरीका उच्च अधिकारी र राजनीतिक पार्टीका ठूला मानिसको मिलेमतोमा तस्करी’
फ्लाइ दुबइ र थाइ एयरवेजबाट सुन आउँथ्यो
प्रहरीकै पास प्रयोग गरी बाहिरिन्थ्यो, २५ देखि ३० किलोसम्म सुन
जेष्ठ १३, २०७५माधव घिमिरे, विनोद भण्डारी
विराटनगर — साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दाका मुख्य अभियुक्त भनिएका चूडामणि उप्रेती (गोरे) ले सुन तस्करी गर्ने कार्य प्रहरीका उच्च अधिकारी र राजनीतिक पार्टीका ‘ठूला मानिस’ को मिलेमतोमा हुने गरेको बताएका छन् ।
जिल्ला अदालत मोरङमा बयान दिने क्रममा उनले यो खुलाएका हुन् । ‘को–को संलग्न छन् यकिन भन्न सक्दिनँ’ बयानमा उनले भनेका छन्, ‘तस्करीबाट आउने सुन सबै इन्डिया जान्छ ।’
आफू सुन तस्करीमा सहयोग गर्ने तल्लो तहको मानिस भएको भन्दै गोरेले आफूभन्दा माथिल्लो तहका सुन तस्करीका नाइके, प्रहरीका उच्च अधिकारी र राजनीतिक दलका ठूला नेता पक्राउ परेका बखत नै सुन तस्करीको असली कुरा पर्दाफास हुने बयानमा उल्लेख गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेता को को हुन् भन्नेचाहिँ उनले खुलाएका छैनन् ।
सुुन बाटैमा लुटियोः
थाइ एयरबाट सुन भित्रिएको तर तोकिएको स्थानमा लैजाने क्रममा बाटैमा लुटिएको अदालतसमक्ष बताएका छन् । ‘दुबइबाट आएको सुन लुटिएको विषयमा कुनै विवाद छैन’ जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासमा आइतबार बयान दिंदै उनले भने, ‘सुन कसले लुटेको हो भन्ने विषय हालसम्म रहस्यमा नै छ ।’
सुन बोक्ने भरिया सानु बनको मृत्यु भइसकेकाले सुन कहाँ गएको भन्ने पत्तो लाग्न असहज भएको उनको भनाइ थियो । सुन मालिक भारतीय रहेको जानकारी पाए पनि आफूले उसलाई नचिनेको गोरेले बयानमा बताएका छन् ।
नेपालबाट स्थलमार्ग हुँदै भरिया परिवर्तन गर्दै भारत जाने गरेको उनको भनाइ छ । तस्करी गरिएको सुन विमानस्थलबाट बाहिर ल्याएबापत सानु बनले प्रतिकिलो ३५ हजार रुपैयाँ पाउने गरेको उनले बयानमा खुलाए ।
जहाजको शौचालयमा राखेर ल्याएको सुन जहाजको सिँढीमा बनाइएको प्वालमा छिराएर हयांगर हुँदै बम मार्फत् बाहिरिने गरेको उनले बताए । सुन थाइ एयर र फ्लाइ दुबइका जहाजमार्फत् नेपालमा सुन भित्रने गरेको उनले बताएका छन् ।
फ्लाइ दुबइमार्फत आएको सुन राजु महर्जन, राजन थापा, अमरमान डंगोल, तुलाराम थारुसहितको समूहले विमानस्थल बाहिर ल्याउने गरेको उनले खुलाएका छन् । त्यसरी आएको सुन विमानस्थलको यात्रु ओसार्ने बस हुँदै अनुकूल समयमा बाहिर निकाल्ने गरेको उनले बताएका छन् ।
हराएको सुन भारतीय व्यापारीकोः
हराएको भनिएको सुनका मालिक भारतीय भएको उनले बयानमा खुलाएका छन् । तर उसलाई आफूले नचिनेको गोरेको भनाइ थियो । दुबइबाट सुुन तस्करी गर्न आफूसमेतको संलग्नता रहेको भने उनले बयानमा स्वीकारेका छन् ।
अदालतले लिपिबद्ध गरेको ३७ पेजको बयानमा उल्लेख छ– ‘मसमेत भइ दुबइबाट नेपाल सुन भित्र्याउने गरेको तथ्यमा कुनै विवाद छैन, २०७४/१०/०९ गते भारतीय व्यापारीले मगाएको साढे ३३ किलो सुन हराएको कुरासमेत यथार्थ हो ।
हराएको सुन पत्ता लगाउनका लागि थाइ एयरलाइन्सका कर्मचारीदेखि भुजुङ गुरुङ, छिरिङ गुरुङ र मेरा सहयोगीलाई समेत शंकाको घेरामा राखी मैले अनुसन्धान गरको हुँ ।
सनम शाक्यलाई कसैले अपहरण गरेको छैन, उनलाई मार्ने उद्देश्य समेत कसैको थिएन, घटना भवितव्यवस भयो । सनम मेरो मिलनसार र विश्वासिलो मित्र थिए, निजको मृत्युमा म दु:खी छु, मैले सनमलाई कर्तव्य गरी मारेको होइन । ’
हराएको सुन पत्ता लगाउने क्रममा कुटपिट गर्दै सोधपुछ गरिए पनि शाक्यलाई मार्ने नियत नभएको उनले बताएका छन् । आफूले शाक्यको मृत्यु भएको अघिल्लो दिन फागुन १७ गते कुटपिट गर्दै सोधपुछ गरेको तर हत्या गर्ने मनसाय नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
टेकबहादुर मल्ल र शाक्यबीच मनमुटाव भएकाले उनैले करेन्ट लगाएको दाबी गोरेको छ । शाक्यलाई लाक्पा शेर्पा, टुकबहादुर, सुरेन्द्र र टेकबहादुर मल्लले कर्तव्य गरी मारेको उनले बयानमा खुलाएका छन् ।
अनुसन्धानमा खटिएका सइ बालकृष्ण सञ्जेललाई आफूले दुई वर्षअघि चिनेको उल्लेख गर्दै गोरेले आफूले सुनको कारोबार गर्ने गरेको बताउँदा सञ्जेलले त्यस्तो काम नगर्नु पछि राम्रो हुँदैन भनेर सम्झाएको गोरेले बताएका छन् ।
‘सनमको मृत्युपछि सञ्जेललाई फोन गरी मैले नै जानकारी दिएको हुँ, उनीहरु मलाई सहयोग गर्ने भनी काठमाडौंबाट हिँडेका र बाटोमा पैसा लेनदेनको विषयमा फोनमा गफ भएको व्यहोरा ठिक हो’ बयानमा उनले भनेका छन्, ‘तर, उनीहरुसँग भेट नहुँदै म इन्डिया गइसकेको थिएँ, पछि के भयो थाहा भएन ।’
प्रतिवादीमध्येका पूर्व डिआइजी गोविन्दप्रसाद निरौला आफ्नो बुबा नेत्रप्रपसादको साथी भएकाले काका भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै आफूले सुनको कारोबार गर्ने कुरा निरौला र आफ्ना बुबालाई थाहा नभएको गोरेले बयानमा बताएका छन् ।
आफूलाई बचाइदिने भन्दै डिएसपी केसी र सइ सञ्जेलले रकम लेनदेनको कुरा गरे पनि विश्वास नलागेर झुक्याउन खोजेको भन्दै आफू भारततर्फ भागेको उनले बताएका छन् । प्रतिवादीमध्येका एसएसपी दिवेश लोहनीलाई आफूले नचिनेको र कुनै सम्पर्क नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
फ्लाइ दुबइ र थाइ एयरवेजबाट आउने सुनको विषयमा विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीलाई थाहा नहुने उल्लेख गर्दै उनले तर प्रहरीकै पास प्रयोग गरी ‘अर्को तेस्रो लाइन’ बाट आएको सुनको विषयमा प्रहरीकै मिलेमतोमा सुन बाहिर ल्याउने गरिएको जनाएका छन् ।
एकपटकमा २५ देखि ३० किलोसम्म सुन आउने गरेको उनको भनाइ छ । दुबइबाट भरियामार्फत सुन आउने र भरियालाई प्रहरीले पास उपलब्ध गराएर बिना कुनै चेकजाँच सुन बाहिरिने गरेको बयानमा गोरेले खुलाएका छन् ।
‘सुन बोक्ने मानिस सहजै प्रहरीका हाकिमको कोठामा जान्थे, झोला त्यहीँ छाडी हिँड्थे । पछि प्रहरीले नै अनुकूल समयमा बाहिर निकालेर तोकिएको स्थानमा छाडिदिन्थे’ उनले भनेका छन् । ‘तेस्रो लाइन’ बाट भारतीय व्यापारीको सुन आउने गरेको उनले बताएका छन् ।
त्यसरी ल्याइएको सुन तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्रीको कोठामा जाने गरेको र उनले अनुकूल समयमा सुन बाहिर निकालेर आफ्ना सहकर्मी भरियालाई दिइ तोकिएको स्थानमा पुर्‍याउन लगाउने गरेको बयानमा उल्लेख छ ।
खत्रीले आफ्ना गाडी चालक र अंगरक्षकको प्रयोग गरी आफैँले चढ्ने गाडीमा राखेर सुन बाहिर पुर्‍याउने गरेको भन्दै यो तरिका खत्रीको सरुवा भएसँगै रोकिएको गोरेले बताएका छन् ।
खत्रीले सुन बाहिर निकाले बापत प्रतिकिलो ५० हजार रुपैयाँ आफैँले बुझ्ने गरेको र यो लाइनबाट ४ सय किलोदेखि ५ सय किलोसम्म सुन आउने गरेको गोरेले बयानमा भनेका छन् ।
अदालतले लिपिबद्ध गरेको गोरेको बयानमा छ– ‘प्रतिवादी टेकराज मल्ल ठकुरी, मोहन काफ्ले र सुरेन्द्र गौतम सुनका भरिया हुन् । भोजराज भण्डारी जग्गाको कारोबारी हुन् । रुस्तम भन्ने मोहम्मद रुस्तम मियाँ, टुकबहादुर मगर, रोहित आचार्य, नरेन्द्र कार्की पनि भरिया नै हुन् ।
लाक्पा शेर्पा मेरा ड्राइभर हुन्, उनीसँग सुन तस्करीको सम्बन्ध छैन । मदन घिमिरे सुन पूर्वतिर आउँदा सेटलमेन्ट गर्थे । भविन तामाङले सानु बमबाट सुन बुझ्ने काम गर्थे ।’
प्रतिवादी छिरिङ वालेङ घलेले सुन तस्करीको धन्धा चलाउने गरेको र आफू उनकै लाइनमा बसेर काम गर्ने गरेको गोरेको भनाइ छ । प्रतिवादीमध्ये सुनीलकुमार अग्रवाल र कृष्णगोपाल अग्रवालले सुनमा लगानी गर्ने गरेको उनले बताएका छन् ।
प्रतिवादी चाचाजी भनिने महावीरप्रसाद गोल्यान अग्रवाल भारतीय व्यापारीका मानिस भएको उल्लेख गर्दै उनले सुन बुझेर भारत पठाउने काम गर्ने गरेको गोरेले खुलाएका छन् । यस्तै प्रतिवादीमध्येका बेनु श्रेष्ठ समेत सुनका लगानीकर्ता भएको उनले बयानमा बताएका छन् ।
प्रतिवादीमध्येका विमानस्थलका कर्मचारीहरु सबैले सुन बाहिर निकाल्ने काममा सघाउने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रहरीले बरामद गरेको रजिष्टर र डाइरीमा उल्लेख भएको सुन कारोबारको विवरण सत्य भएको उल्लेख गर्दै यो सबै हिसाबकिताब शाक्यले राख्ने गरेको गोरेले बताएका छन् । डायरीमा कोड भाषा प्रयोग गर्ने गरेको स्वीकार्दै गोरेले त्यसमा उल्लेख भएका अधिकांश नामका व्यक्तिलाई भने आफूले चिनेको बताएका छन् ।
विदेशबाट सुन मगाउने व्यक्तिहरु सुनसरीको इटहरीस्थित चाँदनी ज्वेलर्सका मालिक बेनु श्रेष्ठ, पोखरा घर भएका प्रमोद श्रेष्ठ, अमुल भनिने भारतीय नागरिक, झापाको भद्रपुरका सुन पसल सञ्चालक अर्जुन शिवाकोटी, भारत दार्जिलिङका रोशन अग्रवाल, धरानका सुनील अग्रवाल, भारत कोलकाताका राजकुमार अग्रवाल, कृष्णगोपाल अग्रवाललगायत रहेको उनले बताएका छन् ।
प्रतिवादीमध्ये प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, कपिलराज पुरी, हेमन्त गौतम, रोशन भनिने गुप्तलाल भुषाल, गीता श्रेष्ठ, अमरमान डंगोल, विष्णुबहादुर खड्का, अमर भनिने अम्बरबहादुर थापा मगर, एसएसपी दिवेश लोहनी र डिएसपी प्रजित केसीलाई आफूले नचिनेको उनले बयानमा बताएका छन् ।
बयानको सुरुमा चाचाजी भनिने महावीरप्रसाद गोल्यान अग्रवाललाई पनि नचिनेको उल्लेख गरे पनि पछि गोल्यान भारतीय व्यापारीको प्रतिनिधि भएको उनले खुलाएका छन् ।
यो मुद्दामा यसअघि अदालतले पूर्व डिआइजी गोविन्दप्रसाद निरौलालगायत २८ जनालाई थुनामा राख्न आदेश दिइसकेको छ । मोरङ जिल्ला कारागार साँघुरो भएकाले उनीहरुलाई अदालतको अनुमतिमा सुनसरीको झुम्कास्थित क्षेत्रीय कारागारमा लगेर राखिएको छ ।
आरोपीमध्ये एकजना साधारण तारेखमा छाडिएका थिए भने अर्का एकजनालाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो ।
गोरेलाई थुनामा राख्न आदेश
दुबइबाट आयात भएको सुन तस्करी र विभिन्न स्थानमा पुर्‍याउने काम, सुन तस्करी गर्ने भरियाहरुलाई दिइएको यातना र मृत्यु, लास दबाउने काममा सक्रिय रहेको, अपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन जस्ता काममा संलग्नता देखिएको भन्दै अदालतले गोरेलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनी कसुरदार देखिएको अदालतको ठम्याइ छ ।
आइतबार उनको बयान सकिएपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक र सहायक न्यायाधिवक्ता रोहित पोखरेलले थुनछेकको बहस गरेका थिए । त्यसपछि गोरेका तर्फबाट अधिवक्ता यामबहादुर मगरले बहस गरेका थिए । बयान, प्राप्त प्रमाणको अध्ययन, पक्ष/विपक्षको बहस सुनिसकेपछि इजलासले उनलाई कसुरदार ठान्दै थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो ।
थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको निमित्त श्रेस्तेदार केदारप्रसाद गौतमले बताए । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ४१ तथा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ११८ को देहाय २ का आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले आदेश दिएको छ ।
उनलाई नियमानुसार सिदा खान पाउने गरी थुनुवा पूर्जी दिइ मोरङ कारागारमा पठाइदिन इजलासको आदेश छ ।
पूर्व डिआइजी गोविन्दप्रसाद निरौलासहित यो मुद्दाका २८ प्रतिवादीलाई यसअघि नै अदालतले थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइसकेको छ । उनीहरुलाई सुनसरीको झुम्कास्थित क्षेत्रीय कारागारमा राखिएको छ ।
३० प्रतिवादीमध्ये एकजना धरौटीमा रिहा भएका थिए भने अर्का एकजनालाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बैशाख १९ गते १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो माग दाबी गर्दै ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा ‘आपराधिक समुह स्थापना र सञ्चालन गरी सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण तथा शरिर बन्धक र कर्तब्य ज्यान’ मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तीमध्ये ३२ जना अझै फरार छन् ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७५ १९:५१
« Reply #7 on: May 27, 2018, 08:31:40 PM »